Imnandi yonke eyamaNguni Amahle – Maskandi Media
Imnandi yonke eyamaNguni Amahle
Amanguni Amahle 2019 anomsoco. Kuyajabulisa ukuzwa abathandi bomculo bencoma uma umculi ekhiphile. Kusukela iphumile le CD kaDlubheke ayaikhiphe ngaphansi kwe album ethi Amanguni Amahle, abalandeli abawuvali umlomo.
“Ulikhuphulile kakhulu izinga umfoka Khuzwayo. Inhle lento akayenzile bengifisa sengathi nabanye abaculi bengabukela kuyena bayeke ukungcofana kodwa beshaye ingoma.
“Buka nje umfoka Khuzwayo uyeke lento yokuthukana nabaculi washaya ingoma enkulu kanjani ethandwa umhlaba wonke. Uyabona uma esethi amathwasa enzani kuvele kuthi angithathe ihawu lami ngilibhule kabili kathathu ngincindi ntelezi kababa mkhulu maqede ngishone mgangeleni”. Kusho uMaqhinga enyoka phansi kwaMandlakazi.
“Ngizothatha leli thuba ngizibongele nami kubathandi bomculo wami. Ikakhulukazi kulaba asebelithengile icwecwe elisha ezitolo zomculo ngithi ngiyabonga. Ngiphinde ngibonge nezincomo eziqhamuka ngapha nangapha besho bonke bethi imnandi yonke”.
“Kuyisifiso sami kusukela kudala ukwenzela abantu bakithi into enandi nabazoyijabulela. Ukubezwa bencoma kahle kanje kungenza ngibone ukuthi umsebenzi wami muhle”.
“Asihlangane kwiMpucuzekoke lapho engiyobenzela khona into yamehlo okuyoze kuphele lonyaka besakhulua ngayo ngoba ngazalwa ngaba igagu. Ziyenzeka izinto eThekwini mhlaka 20 July 2019. Kulaphoke abayobona khona ukuthi ngiyadlala uma sengithe ngiyadlala”. Kubeka ulubheke umfoka Khuzwayo le phansi kwaNgqulu.
Previous Previous post: Kucwebe iziziba ngama AK
Next Next post: Uzokuphinda lokho uMzukulu